Antonio Conte oo ka hadlay mustaqbalka Icardi iyo imaatinka Lukaku ee kooxda Inter – Gool FM
(Italy) 31 Maajo 2019. Macalinka cusub kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa ka hadlay mustaqbalka Mauro Icardi iyo xaqiiqada ku aadan imaatinka Romelu Lukaku ee garoonka San Siro.
Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa maanta si rasmi ah ugu macagacawday macalinka reer Talyaani ee Antonio Conte inuu yahay tababaraha cusub ee kooxda, si uu u noqdo badalka Luciano Spalletti oo khamiistii shalay shaqad laga qeyriyay.
Hadaba Antonio Conte ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “BBC” wuxuu kaga hadlay dhowr arimood ay ka mid ahaayeen xiddigaha Mauro Icardi iyo Romelu Lukaku wuxuuna yiri:
“Waxaan ka hadleynaa koox weyn oo leh taariikh weyn, xiligan la joogo waxay heystaan rajooyin la mid ah kuwa aan aniga heysto, waxaan dooneynaa inaan guuleysano oo aan dhisno wax muhim ah, sidaasi darteed waxaan go’aansaday inaan halkaan imaado”.
“Kani waa loolan weyn aniga ahaan, waxaan doonayaa inaan ku celiyo wixii aan ka sameeyay kooxda Juventus”.
Waxaa jira warar xan ah oo ku saabsan mustaqbalka Mauro Icardi, kaddib markii ay soo baxeen warar la xiriira in weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku uu la imaan doono Antonio Conte kooxda Inter.
Laakiin macalinka cusub kooxda Inter Milan ee Antonio Conte ayaa arintaas si cad kaga hadlay wuxuuna yiri:
“Way adag tahay in laga hadalo arintaas, waxaan heysanaa qorshe waxaana isku dayi doonaa inaan horumarino kooxda, imaatinta Lukaku ee kooxda Inter, lama kulmin waana war been abuur ah, laakiin waxaa jira agaasimaha ciyaaraha ee kooxda isaga ayaana ka jawaabaya wararka ku saabsan suuqa”.